မည်သည့် Android တွင်မဆို Nokia ကင်မရာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
ဒီနေ့ရဲ့ဒုတိယနေ့ဗီဒီယိုကဒီပွဲကိုခံထိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာငါသင်တော့မယ် မည်သည့် Android terminal တွင်မဆို Nokia ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ပါ.
Nokia ရဲ့ကင်မရာအသစ် ကြောင်းယခု OTA မှတဆင့် HMD Glogal ဆိပ်ကမ်းရောက်ရှိနေပြီ Android 7.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဗားရှင်းရှိသည့်မည်သည့် Android terminal ကိုမဆို Android apk တွင်တပ်ဆင်ရန်တိုက်ရိုက်အဖုံးပါ, ဤ မူတည်၍ အခြေခံအားဖြင့်ပြောရလျှင် XDA ဖိုရမ်၌ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသည့်နေရာတွင်လိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံး Android ဗားရှင်းကိုကြေငြာခြင်းမရှိပါ။ Android Oreo6ပါသည့် Xiaomi Mi 8.0 တွင်ဤပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ထားခဲ့သည့်ပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
1 apk ကို XDA မှတိုက်ရိုက် Download လုပ်ပါ
2 Nokia ကင်မရာအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံး
3 Androidsis Community မှ Nokia ကင်မရာကို Download လုပ်ပါ
apk ကို XDA မှတိုက်ရိုက် Download လုပ်ပါ
အက်ပလီကေးရှင်း၏တက်ကြွသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြောပြရမည်နည်း။ သင့်ကို XDA Developers forum သို့ခေါ်ဆောင်သွားမည့် link ကိုတိုက်ရိုက်ရှာနိုင်သည် အဘယ်အရပ်မှသင်တို့တတ်နိုင်ကြလိမ့်မည် နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Nokia ကင်မရာ၏ apk ကို download လုပ်ပါ.
အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သော Android version ကိုကြော်ငြာမထားပါက၊ Android 8.0 Oreo မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသာကျွန်တော်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်Android Nougat ဗားရှင်းများအနေဖြင့်ထိုအရာသည်တူညီစွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း application သည်သင်၏ Android terminal နှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Nokia camera apk ကို install လုပ်ပါ Oreo အပြင်အခြား Android ဗားရှင်းတစ်ခုတွင်သင်တပ်ဆင်ရန်မည်သည့် Android terminal မော်ဒယ်နှင့် system version ကိုတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းနှင့်ပါကအောင်မြင်စွာ install လုပ်ပြီးပါကသင့်အားမှတ်ချက်ချန်ထားရန်တောင်းပန်ပါလိမ့်မည်၊ မင်းပိတ် ရပ်ရွာကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ပို့စ်၏ header ကို၌တည်၏ ငါသည်သင်တို့ကို Nokia ကင်မရာအသစ်ကကမ်းလှမ်းသောအရာအားလုံးကိုပြသတဲ့သင်တစ် ဦး ကိုဗီဒီယိုထားခဲ့ပါ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ Xiaomi Mi6ကို Android Oreo ပါသော။ အရာရာတိုင်းနီးပါးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကင်မရာ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံအားဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်လိုက်ပြီး၎င်း၏ cache နှင့်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းလိုက်သော application အားအခြားအတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့မီးမောင်းထိုးပြ Dual Camera Mode ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာကိုတစ်ဝက်တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ဝက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်သည်, မျက်နှာပြင်အပြည့်နောက်ဘက်ကင်မရာကိုဖွင့်ထားသည့် PIP စနစ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအထူးသဖြင့်၎င်းကိုရေပေါ်ပြတင်းပေါက်ရှိရှေ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ၀ င်စားမှုအရအာရုံစူးစိုက်မှု၊ တောက်ပမှု (သို့) မြင်ကွင်းပုံစံကဲ့သို့သော parameters များကို configure လုပ်နိုင်သည့် Manual mode.
Androidsis Community မှ Nokia ကင်မရာကို Download လုပ်ပါ
သငျသညျ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း ကိုနှိပ်ပါ ဤ link တွင် apk ၏တိုက်ရိုက် download ကိုသင်ရယူလိမ့်မည် ဒီ မည်သည့် Android terminal မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့် Nokia ကင်မရာဗားရှင်းအသစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » မည်သည့် Android တွင်မဆို Nokia ကင်မရာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Luis Tovar ဟုသူကပြောသည်
Android3ကိုကျော် Miui 9.5 ဖြင့် Xiaomi Redmi Note 6.0 Pro တွင်ထည့်သွင်း။ မရပါ
Luis Tovar အားပြန်ပြောပါ
Francisco ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့် moto g4Plus မှာ Xdva ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မက္ကဆီကို၊ Xalapa၊
Raul rodriguez ဟုသူကပြောသည်
MIUI6ပါသည့် Xiaomi MI9.2.3 တွင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
Raul Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
မြင်ကွင်းကျယ်ကို MiA1 တွင်ဖမ်းမိသည်